घरमा गणेशको यस्तो मूर्ति राख्नुहोस..,भाग्य चम्कने मात्र नभई मिल्नेछ सुखै-सुख ! जयश्री गणेशायनम – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/घरमा गणेशको यस्तो मूर्ति राख्नुहोस..,भाग्य चम्कने मात्र नभई मिल्नेछ सुखै-सुख ! जयश्री गणेशायनम
भगवान गणेशलाई विघ्नहर्ता भन्ने गरिन्छ । र कुनैपनि शुभ कार्य गर्नुअघि भगवान गणेशको पूजा गर्नु जरुरी रहेको छ र गर्ने गरिन्छ । शास्त्र अनुसार भगवान गणेशको हरेक रूप शुभ र मंगलकारी मानिन्छ साथै वास्तुशास्त्र अनुसार पनि गणेशको मूर्तिलाई घरमा राख्नाले निकै शुभ मानिने गरिन्छ। भगवान गणेशको मूर्ति घरको मुख्यद्वारमा लगाउने परम्परा रहेको छ ।
यस्तै आँप, पीपल र नीमबाट बनेको गणेशको मूर्त‌ि घरको मुख्यद्वारमा लगाउनु पर्दछ । यसबाट घरमा सकारात्मक उर्जा आउने गर्दछ, जसलाई धन र सुखमा वृद्ध‌ि कारकको रुपमा मानिन्छ । आइतबार या पुष्य नक्षत्रमा श्वेतार्क गणेशको मूर्ति घरमा ल्याएर नियमित पूजा गरे गणेशको मूर्त‌िले धन र शान्ति प्रदान गर्ने बताईएको छ।
क्र‌िस्टलले बनेको गणेशको मूर्त‌िले वास्तु दोषलाई टाढा राख्नको लागी बिशेष भूमिका रहेको मानिएको छ । गणेशको साथै क्र‌िस्टलकी लक्ष्मीको पूजाले घरमा धन र सौभाग्य भित्रिने विश्वास रहेको छ । बेसारबाट गणेशको मूर्त‌ि बनाएर घरमा राखे निकै नै शुभ र सुखदायक मानिन्छ भने गाई र गोबरबाट बनेको गणेशको मूर्त‌ि धन वृद्ध‌िकारक मानिएको छ ।